Kiya iyo Apple Watch kana uchizogeza nayo | Ndinobva mac
Kiya iyo Apple Watch kana uchizogeza nayo
Jordi Gimenez | 09/07/2021 22:00 | dzakawanda
Zhizha riri kuuya uye riine iro gungwa kana dziva… Izvi zvinopfuura zvinoitwa zvezuva nezuva kune vazhinji vedu, saka nhasi tichaona kuti tingamise sei iyo yekuvharira yemvura paawa kuitira kuti idzivise zvingangoitika zvisina basa zvekubata.
Chinhu chinowanikwa kubva kuApple Watch Series 2 kune yazvino Apple Watch Series 6 inokutadzisa kubva netsaona kurishandisa uri mumvura. Iyo nguva yatinobvisa iyi Yemvura Lock zvakare, wachi yacho inodzinga marara emvura kubva kune mutauri kuburikidza nekudengenyeka uye inzwi. Izvi zvinonakidza nekuti nenzira iyi zvinodzivirirwa kuti ruzha rwunogadzirwa neApple Watch rwakafukidzwa nemadonhwe emvura anosara mukati.
1 Maitiro ekumisikidza iyo Kiyi Yemvura
2 Maitiro ekumisa iyo Kiyi Yemvura uye kudzinga mvura
Maitiro ekumisikidza iyo Kiyi Yemvura
Chatinofanira kuita kumisikidza kukiya kwemvura kungo svikira marongero ewatch kana kuita chiitiko chemuviri chine chekuita nemvura. Mupfungwa iyi matanho ari nyore uye ikozvino tichaenda kuona iyo yekushandisa activation maitiro:
Dhinda bhatani reMvura Lock iro rinowanikwa mune mapfupi ewachi. Kuti tiite izvi, tinotsvedza kubva pasi kumusoro uye tinya pane otomatiki kukiya icon inowoneka muchimiro chedonhwe.
Ipapo tichaona chiratidzo ichi muchikamu chepamusoro cheuso hwewachi uye hatizokwanise kuyanana nechiratidziri
Kiyi yemvura inozoitwawo otomatiki kana uchitanga chiitiko chemuviri mumvura, sekushambira kana kufambisa, pakati pezvimwe zviitiko.
Maitiro ekumisa iyo Kiyi Yemvura uye kudzinga mvura
Kana kumisikidza kwapera isu tinongofanira kudaro shandura iyo Dhijitari Korona (yedhijitari korona) kusvikira Unlocked yaonekwa pachiratidziro. Iwe unogona kushandura iyo Dhijitari Korona mune chero nzira, usazvidya moyo nezvayo. Iye zvino iwe uchazonzwa nhevedzano yemitinhimira yekuti izvo zvavanoita kubvisa maratidziro emvura kubva kune mutauri pamwe nekutetepa zvinyoro. Kana varega kuteerera, unogona kushandisa chidzitiro senguva dzose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Kiya iyo Apple Watch kana uchizogeza nayo
Turera yeApple TV + akateedzana "Mr. Corman" yave kuwanikwa
Kuo anoti kugadzirwa kweMacBook Pros kuchatanga munguva pfupi